कसरी राम्ररी अङ्गुरको खोप सञ्चालन गर्न?
को अङ्गुर लागि अर्डर एक उच्च उपज थियो, र फल ठूलो र मीठो थिए, यो खोप दिनु आवश्यक छ। बुझे कलमी अङ्गुर भएपछि, छिटो नयाँ प्रजातिहरू र गुणस्तर क्रप प्राप्त गर्न सकिन्छ।
नियम, प्रक्रिया सफल छ। यो कठिन सञ्चालन गर्न छ, र अक्सर अप्रिल मा वसन्त, हुँदा कली सुनिंनु सुरु प्रक्रिया। घूस पूर्व प्रक्रिया गर्न, यो यस मामला मा अन्तस्करणले बाँकी छन्, किनभने फ्रिज राख्न सबै भन्दा राम्रो छ। अङ्गुर वसन्त कलमी छ शून्य माथि 10 डिग्री को मूल नजिकै तापमान, यद्यपि हावा तापमान + 15 डिग्री हुनुपर्छ जब आयोजित। कहिलेकाहीं तपाईं समाप्त PASOK विनियोजन पछि आवश्यकता खोप दिनु कि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँको चयन मात्र पछि पहिलो पात देखा रोक्छ किनभने यो, गलत हुन मानिन्छ। र यो प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। र हानि रुखको रस बाहेक contrived: यो जहाँ अङ्गुर बाहिर खोप लगे छ स्थानमा एक नम वातावरण सिर्जना किनभने यो उपयोगी छ।
यो प्रक्रिया सफल आचरण वंशज र rootstock को अनुकूलता को डिग्री मा निर्भर गर्दछ। घूस अस्तित्व को एक डिग्री को हुर्किसकेका जो अन्तर्गत आमा झाडी अवस्थाको मा निर्भर गर्दछ। यो पनि एक धेरै खराब प्रभाव माटो गरिबी र सूक्खापना छ। स्वाभाविक, टीका, को प्रविधी र चिस्यान को मात्रा रिपोर्ट गरिएको छ उदारवाद गर्ने अधिकार अवस्था मा घूस राख्न आवश्यकता निम्न गर्नुपर्छ।
यो एक ठूलो महत्त्व इच्छित काटन कलम बांधने लागि सही विकल्प हो भनेर सम्झनु पर्छ। को दूर खसेको एक सानो जुङ्गा उब्रिएको एक स्थान, हुनुपर्छ तल्लो नोड मा याद गर्नुहोस्। यो स्थान मा डायफ्राम विकास गरिएको छ।
अङ्गुरको Inoculation विकल्पहरू धेरै छन्। Winegrowers अक्सर प्रयोग खोप विभाजन मा एक भूमिगत स्टेम, हरियो गोली मार मा खोप गर्मी, को जरा (पनि उच्च ग्रेड भनिन्छ) मा inoculated, साथै भूमिगत र polurasschep रूपमा। अभ्यास शो, धेरै समस्या, यो प्रक्रिया कारण छैन। मुख्य कुरा हो - यो रेखाचित्र अनुसार सबै गर्न।
खोप पनि विभाजित छ:
"काला मा काला" (पुरानो काठ मा गत वर्ष गरेको inoculated परिपक्व बालाको)।
"हरियो काला" (गत वर्ष गरेको पाकेको - हरियो गोली मार मा)।
"हरियो मा ग्रीन" (हरियो भाग - प्लेट समावेश मृगौला मा)।
हरियो कलमी अङ्गुर - हरियो मार मा बढ्दै मौसममा बाहिर छ, जो प्रजाति, को छ। को वंशज हरियो मार को cuttings प्रयोग गरिएको।
त्यहाँ धेरै प्रकार हो कलमी: कलम बांधने ह्यान्डल (सरल kopulirovka विभाजन वा भाग्ने) र inoculation मृगौला ढाल संग (नवोदित द्वारा आयोजित)। पहिलो दुई प्रकारका मई देखि आयोजित र जुन समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ अन्तिम प्रकारको सर्वश्रेष्ठ छ व्यवहारमा उतार्ने मिड-अगस्ट गर्न मिड-मई देखि।
तपाईं inoculation ह्यान्डल चुनिएको छ भने, यसलाई अघि, त्यसै वर्ष मा privoyny भाग्ने विकास किनभने, क्रमशः, maturing को विकास को लागि समय पर्याप्त नहुन सक्छ, चिसो मौसम को शुरू संग खोप को मृत्यु कि नेतृत्व लगे छ।
अङ्गुरका inoculation बाहिर छ भने नवोदित प्रयोग गरेर तन्तु अंकुरण प्रक्रिया को वर्ष मा उत्पन्न गर्दैन। भाग्ने निम्न वर्ष मात्र विकास गर्न थाल्छ।
त्यहाँ खोप कुनै प्रकारको precedes कि तैयारी को एक निश्चित चरण हो। हामी प्रक्रिया प्रत्येक प्रकार एक निश्चित ढाँचा, पहिलो खोज्नुभयो हुनुपर्छ जसमा गरिन्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। अन्यथा, टीका बस सफल छैन।
रूपमा चाँडै मार बढ्न सुरु रूपमा, तिनीहरूले समर्थन प्रयोग गरेर माथि गाँसिएका गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, तिनीहरूले जहाँ बढ्न माटो, चिस्यान को पर्याप्त डिग्री हुनुपर्छ र सामा को निरन्तर साफ।
यी सुझाव, तपाईं स्वतन्त्र बाहिर अङ्गुर, आफ्नो तरिका को प्रत्येक प्रविधिको पूर्व-निर्दिष्ट सुविधाहरू खोप बोक्न सक्छ।
चेरी, "Starbucks": मुख्य बाह्य संकेत को वर्णन, फल र जाँगरको ग्रेड को गुण
जेड: ब्लूम - छैन एक संकेत!
बागवानी मा सुन्तला बोक्रा प्रयोग
मिनी शर्ट्स - पतला सुन्दर खुट्टा को मालिक को लागि लुगा
लिनुहोस् कारण: दुखेको घाँटी निगल दुख्छ?
Glycine - प्रयोग गर्न contraindications, अध्ययन दबाइ
आइमाइहरु को लागि विचार: घर मा नरमाइलो भने के के